Image Stacking ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်အလုပ်သလဲ? - PX
Image Stacking ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်အလုပ်သလဲ?
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာကတော့ Smartphone Camera တွေမှာအသုံးများလာတဲ့ Function တစ်ခု အကြောင်းပါ။ Image Stacking ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာ Smartphone Crazy တွေအတွက် စိမ်းနေပေမယ့် DSLR သမားတွေအတွက်ကတော့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လောက်မှာပါ။ ဒီတော့ သူ့အကြောင်းကို အရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်။
“ရှုခင်းတစ်ခုကို ပုံစံတစ်မျိုးတည်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံတွေကိုပေါင်းပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ပုံတစ်ပုံရအောင်လုပ်ယူခြင်း” ကို Image Stacking လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆရာ သမားတွေအတွက် Photoshop လို Software မျိုးကိုသုံးပြီး လုပ်ယူလို့ရတယ်။ အဓိကအားဖြင့် Long Exposure ကို အချိန်အကြာကြီးရိုက်ကူးဖို့ အဆင်မပြေတဲ့အခါမျိုးမှာ Short Exposure တွေအများကြီးခွဲရိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးများတယ်။ (ဒီနေရာမှာ Long Exposure အကြောင်း နည်းနည်းပြောပါ့မယ်)
Long Exposure ကိုအလွယ်ပြောရင် Camera ကို Tripod နဲ့အငြိမ်ထားပြီးရှုခင်းတစ်ခုတည်းကို အချိန်ကြာကြာရိုက်ကူးစေတာပါ။ Smartphone တွေမှာတော့ Manual Mode မှာရိုက်နိုင်သလို Huawei တို့ ZTE တို့မှာပါတဲ့ Star Trails, Light Painting, Silky Water စတာတွေဟာ Long Exposure Function တွေပါပဲ။
Long Exposure (Star Trails Photography)
လိုရင်းကိုဆက်ပါ့မယ်။ တစ်ချို့ Long Exposure Photo တွေဟာ အကောင်းဆုံး Quality ရဖို့ မိနစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရတယ်။ အဲလိုအကြာကြီးအချိန်မယူနိုင်တဲ့အခါမျိုး၊ Camera က Heat တက်လွယ်လို့မရိုက်နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ Image Stacking ကိုသုံးရတယ်။ (ဥပမာ ၁၀ မိနစ်စာ ရိုက်ရမယ့်အစား ၂ မိနစ်စာ ၅ ခါရိုက်ပြီး Photoshop မှာ ပြန်ထပ်ခြင်းအားဖြင့် ထပ်တူနီးပါး Quality ကောင်းတဲ့ Image မျိုးရသလိုပေါ့)
Image Stacking ကိုအခြေခံတဲ့နောက်တစ်နည်းကတော့ Focus Stacking ပါ။ ဥပမာ ခုံတစ်ခုံပေါ်မှာ အရုပ်တွေအများကြီးတင်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုပါစို့။ ရှေ့ကအရုပ်တွေကို Focus ယူရင် နောက်ကအရုပ်တွေ ရုပ်ထွက်မကြည်လင်ဖြစ်မယ်။ အဲလိုမဖြစ်ရအောင် ပုံစံတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ နေရာစုံ Focus ထောက်ပြီးရိုက်မယ်။ ပြီးတော့မှ ရလာတဲ့ပုံတွေကို ထပ်ပြီး Multi-focus နဲ့ ကြည်လင်တဲ့ပုံတစ်ပုံရအောင် ဖန်တီးကြတယ်။
Smartphone Camera တွေမှာကတော့ Image Stacking ကိုအဓိကအားဖြင့် ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့သုံးတာ တွေ့ရတယ်။ ပထမတစ်မျိုးကတော့ ပုံတွေထပ်ပြီး Megapixel ပိုများတဲ့ပုံတစ်ပုံအဖြစ် ဖန်တီးတာပါ။ Oppo ရဲ့ Find 7a, Asus ရဲ့ Zenfone2တို့မှာ ဒီနည်းပညာကို စပြီးတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ (Asus မှာတော့ Super Resolution လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။)
ဒီဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးမှာ 13MP Camera တွေကိုသုံးထားကြတယ်။ သူ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ 13MP Photo ၄ပုံကိုတစ်ခါတည်းရိုက်၊ အဲဒီ၄ပုံကိုထပ်ပြီး Resolution ပိုများအောင် Software က ပံ့ပိုးပေးတာပါ။ (13×4=52) အဲဒါဆို 13MP ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ 50MP ပုံတစ်ပုံထွက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်လဲသိလောက်ပြီထင်ပါရဲ့။ Hardware, Software ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေများတဲ့ခေတ်ကာလမှာ ဒီနည်းပညာက ထင်သလောက်မဖြစ်ထွန်းပဲ လူသိနည်းတဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ Smartphone Crazy တွေကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်စေလောက်အောင် Camera အစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Google ရဲ့ HDR+ ပါ။ HTC ရဲ့ HDR Boost, Samsung ရဲ့ Multi Frame Noise Reduction, Xiaomi ရဲ့ HHT Mode စတဲ့ ပုံစံတူနည်းပညာတွေရှိပေမယ့် Google ရဲ့ HDR+ ကတော့ လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမှာပေါ့။
Google ကိုယ်တိုင်လည်း Nexus 5x, 6P တို့မှာကတည်းက HDR+ ကိုသုံးခဲ့ပေမယ့် ထင်သလောက်မပေါက်ရောက်ခဲ့။ ဒါပေမယ့် Snapdragon 820 မှာ Spectra ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Image Sensor Processor(ISP) ကို အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ချိန်မှာတော့ SD 821 နဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့ Google Pixel ဟာ Camera ပိုင်းမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ကို စပြီးတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီနောက်မှာ Google ဟာ SD 835 ကို Qualcomm နဲ့ပူးတွဲအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး Pixel2ကို ထိပ်တန်း Smartphone Camera အဖြစ်မွေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း Pixel3မှာ Image Stacking နည်းပညာကို ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး Flash မလိုတဲ့ Low Light Photography ကို အမိုက်စားရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တယ်။
နည်းပညာချင်းအတူတူမှာ Google ရဲ့သာသွားတဲ့အချက်က Software Optimization ပါ။ တစ်ခြား Camera Software တွေက အများဆုံး ၃ ပုံနဲ့ ၄ပုံကြားပဲ Image Stacking လုပ်နိုင်ချိန်မှာ HDR+ က အလင်းအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး အများဆုံး ၉ပုံအထိ ပုံထပ်နိုင်တယ်။ HDR+ နဲ့ရိုက်ကူးပြီးချင်းမှာပဲ ပုံထပ်တာကို နောက်ကွယ်မှာလုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် Pixel2ဟာ Low Light မှာ ပြိုင်ဘက် Camera တွေထက် ပိုပြီး Detail ကျတဲ့ပုံတွေရိုက်ကူးနိုင်တာပါ။ Image Stacking ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ လှုပ်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးမိတဲ့အခါမျိုးမှာ “Ghosting Effect” လို့ခေါ်တဲ့ ပုံရိပ်ဝေဝါးတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တာပါပဲ။
ဒါကတော့ သင်ရိုက်နေတဲ့ flash မလိုတဲ့ Low Light Mode တွေ၊ HDR Mode တွေမှာ နောက်ကွယ်ကနေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ Image Stacking အကြောင်း ဖတ်ထား၊ မှတ်ထားသမျှ တစ်စေ့တစ်စောင်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အခြား နည်းပညာ Company တွေနည်း ဒီပညာကိုအသုံးချပြီး ပိုကောင်းတဲ့ Feature တွေကို ဖန်တီးနေကြပါပြီ။ အခုဆို Xiaomi က 108MP ကိး 27MP ထိပြန်ချုံပြီး Pixel Binning နည်းပညာကို Image Stacking နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးသုံးထားတာတွေကို တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဘယ် Company တွေက ပိုကောင်းတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ဘယ်လိုချပြမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စွာစောင့်စားရင်း…
S11 Series အတွက် Samsung ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် “Bright Night” camera sensor